Khuphela iimephu zesitalato kwiGoogle Earth-Geofumadas
NgoSeptemba, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley
Kulwazi lwethu, akukho nkqubo (okwangoku) enokukhuphela izitalato zikaGoogle zomhlaba kwifomathi yevektha. Nangona unako kwiMephu eziVulekileyo zesitrato, kubi kakhulu aziveli kuzo zonke izixeko.
Kodwa ukuba umntu unomdla kwizitrato zikaGoogle Earth, ke indlela yokuphuma kukuzikhuphela njengomfanekiso, emva koko wenze isilwanyana njengenkomo kubo. Nazi ezinye iingcebiso zokunciphisa inqanaba lobundlobongela:
1 Beka umfanekiso omnyama
Senza oku, ukuze umfanekiso wesathelayithi ungaphazamisi kwaye uphucule ukubonakala kwezitrato. Umfanekiso omnyama we-bmp wenziwe kwi-Mspaint kwaye wabizwa kwiGoogle Earth, wayolula ngaphezulu kwendawo enomdla.
2 Khuphela umfanekiso ngeStchmaps
Ngoku, usebenzisa Iziqu, sakhetha umongo osivumela ukuba sibone iitekisi zobuncinane ngaphantsi kwevector yesitalato.
Jonga ukuba, nangona i-Google Earth ingazange ibone zonke izitrato ekuphakameni komfanekiso, i-Stitchmaps yikho konke, sikhetha ukuphakama kwezantsi, kule meko i-384 metres.
Nje ukuba i-mosaic ichazwe, siyalela ukuba sikhuphele, kwaye silinde i-mosaic ukuba ihambelane. Okokugqibela siyigcina ngefomathi yetiff, kunye nefayile yokulinganisa yeOziExplorer (.map). Umfanekiso ujongeka ngoluhlobo: umfanekiso ekunene kukwandiswa:
Njengomzali, ukuba sifuna ukuyiguqula ibe .ecw, in IMapper Global Singenisa, sinike uqikelelo kuyo kwaye siyixelele ukuba iyilungise kwifayile ye-.map. Emva koko inokuthunyelwa ngaphandle kwi .ecw yokuphathwa ngcono kwenye inkqubo.
3 Yigqitye ngokucwangcisa inkqubo
Dweba umgca ngomgca unokuba lunesiqingatha esichukumisayo, ukuba ufuna ukuhamba ngokukhawuleza, unokusebenzisa inkqubo yokucwangcisa ngokuzenzekelayo, njenge-Microstation Descartes.
Kuqondwa ukuba umfanekiso we .ecw ugoboliswe, (nangona unokwenziwa kwiScartes), okuzayo kukuguqula umfanekiso ube ngumtoti, ngenkqubo efanayo esiyibonisayo kwisithuba sangaphambili.
Imaski yenzelwe iithowuni ezityheli, kunye nenye yeethoni ezingwevu emva koko siyixelele ukuba iziguqulele kwivenkile enesicoci sendawo. Icandelo apho isicatshulwa sikhona, i-vector ayizukuyilwa, kuya kufuneka siyenze umanyano ngeenyawo, nangona ufuna ukuthatha ithuba ngeDescartes, kunokwenzeka ukuba uya kuguqula zonke iitoni zombhalo ziye kwingwevu yesitalato, yiyo loo nto sayenza yancinci. Ukuba isicatshulwa siza kuvezwa, sebenzisa lo myalelo kwisicatshulwa esiqhelanisiweyo.
4 Xa ungenayo i-Microstation Descartes
Kufuneka kwakhona isebenze okufanayo nge-AutoDesk I-Raster Design, ArcScan, GIS asibonise, kunye neCorel Trace.
Post edlulileyo«Ngaphambilini 10 iimpendulo ezinomdla
Post Next Uphefumulelwe i-2009Okulandelayo »
5 Ukuphendula "Khuphela iimephu zesitalato kwiGoogle Earth"
Inqaku livela ngo-2009 kwaye lijolise kwimfuno yokwenza nomsebenzi weTrace-ukusuka kwiMicrosation. Kukho amanye amanqaku ekucaciswe ukuba ungayenza njani kwi-OSM usebenzisa i-QGIS.
kwaye kutheni ungasebenzisi i-qgis kwaye uyaziphepha amanqanaba amaninzi kwaye usebenze
Live Mexico! uthi:
Bacaphuna apha basekhaya: http://geomarketingspain.blogspot.com/
Hi Javier, Inkscape yindlela esebenzayo kakhulu kwiCorel Draw
Ndiyongeza i-Inkscape (ikhululekile) ukukhupha